Seranan-tsambon`i Toamasina Ho lohalaharana aty amin`ny Ranomasimbe Indianina sy Afrika
Napetraka omaly alatsinainy ny vato fehizoron`ny fanitarana ny seranan-tsambon` i Toamasina ary haharitra fito taona ny asa fanamboarana izany fotodrafitrasa goavana izany. Mitentina 45,214 miliara Yen japoney na 639 tapitrisa Dolara no famatsiam-bola azo amin’izany ka averina ao anatin’ny 40 taona.
Fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina Manara-maso akaiky ny tetikasa ny BIANCO
Notanterahana omaly tetsy amin’ny Ministeran’ny fitaterana sy ny fampahafantarana ny toetry ny andro Anosy ny atrikasa fanentanana sy fanetsehana hisorohana ny mety hisian’ny kolikoly amin’ny tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’ny Toamasina.
Vokatra ronono eto Madagasikara Mbola ambany dia ambany
Hiditra amin’ny andiany faha 4 ny 18 ka hatramin’ny 20 mey izao ny foira ekonomika lehibe ao Vakinankaratra na ny « Zovy 2018 » atao ao Antsirabe.
Fivorian’ny FMI any Washington Miandrandra ny volan’ny FEC mpitondra
Nosokafana tamin’ny 16 aprily lasa teo ny fivoriana “Reunion de printemps” izay ataon’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) sy ny Banky Iraisam-pirenena any Washington - Etazonia. Ity fivoriana ity moa dia manome sehatra ireo tompon’andraikim-panjakana misehatra amin’ny lafiny vola,
Fampiroboroboana ny varotra ivelany Manome lesona ny Karana
Taorian’ny fitsidihana ofisialy teto Madagasikara nataon’ny filoham-pirenena indiana, Ram Nath Kovind sy ny vadiny tamin’ny volana Martsa lasa teo dia misy ny fiaraha-miasa miompana amin’ny ara-toekarena amin’ny ambasadin’ny Inde izay monina sy miasa eto.
Mpamboly lavanila ao SAVA Sahirana amin’ny fiahiam-pahasalamana
Mbola tsy manana fahafahana handray an-tanana araka ny tokony ho izy ny fiantohana ny fahasalamany hatreto ireo tantsaha mpamokatra lavanila any amin’iny faritr’i SAVA iny, raha ny fanazavan-drizareo avy eo anivon’ny Symrise, izay isan’ny rafitra iray miahy ny fahasalaman’izy ireo any an-toerana.
ZES Madagascar Miendrika famarotana tanindrazana
Hatreto aloha dia misesy ireo fanehoan-kevitra eo amin’ny mpanao politika, eo amin’ny mpahay toekarena, eo amin’ny sehatra samihafa izay misintona ny sain’ ireo mpikambana ao amin’ny HCC mba tsy hankatoa ireo volavolan-dalàna izay miteraka resabe. Anisan’izany ny lalàna mifehy ny ZES izay tena miendrika ho famoratana tanindrazana hoy izy ireo.
Potika daholo ny lalana manerana ny renivohitra sy ny manodidina. Manomboka aty Ambatoroka ka hatreny Ankorondrano mandalo Analakely sy Ambohijatovo ary Anosy. Mipaka any 67ha sy Anosizato. Tsy misy maha renivohitra azy intsony e. Potika ny fiara, mandany vola be ny rehetra noho ny fitohanana etsy sy eroa, nefa dia mazava fa anjarantsika tsirairay avy no mampihena ireo fandaniana amin’ny entana afarana mba hampihenana ity sandam-bola vahiny ity. Sa ve tsy hainareo izany ry Jean Eric ? Mandray anjara mavitrika anie ianareo amin’ny fampahantrana ny Malagasy noho ny fahasimban’ny lalana e ! Raha tsy hiteny afa tsy ny eo Anosizao eo amin’ny tetezana sy ny manodidina fotsiny aho. Angamba mety vitan’ny 200 tapitrisa ariary any ho any io dia afaka daholo ny amboteiazy mampikaikaika ny olona amin’iny faritra iny. Dia hiteny ianareo hoe tsy misy vola nefa tsy ampy lasantsinareo enim-bolana anie izany e! Vakio fotsiny ny tetibolanareo tamin’ny 2017 sy ity 2018 dia hita ao fa miliara maromaro no laninareo amin’ny fampandehanan-draharaha. Izany hoe ny taratasy, ny fahana amin’ny finday sy ny solika.Fanahy iniana ve sa tsy fahaiza-mitantana izy ity ry Jean Eric ah? Sa izaho no diso fa mba efa misy tetiandro mandehandeha any ? Enga anie ka ho diso aho. Enga anie ka aloka sendra nandalo ka nandavaka lalana tsy satry. Fa raha izao mantsy no mitohy dia minoa ahy ianareo fa dia mety tsy ahazo 10% akory amin’ny vaton’Antananarivo amin’ny fifidianana ho avy.Tsy manahy anie na ho ataonareo fanararaotana amin’ny propagandy ary ilay izy e, fa mba teny iray fotsiny no ataoko ho anao hoe « ATAOVY ».Miala tsiny ry Jean Eric fa tezitra ny tenako manoratra izao taratatsy izao ho anao satria tena tsy mahatsapa mihitsy ianareo hoe mampijaly ny vahoaka sy ny firenena anie ity lalana simba ity. Dia mba ampitao any amin’i Ra Jean Forsa any fa tsy ny famaizana an’Antananarivo anie no hampitombo ny isam-batonareo e ! Mandrapihaona indray ary.